Kyrgyzstan: Habetsahana sy Hatsarana mialoha ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Svenska, Español, Français, 日本語, বাংলা, English
“Kandidà 83!!! Mampihomehy!!! Na izany aza manantena ny tsaratsara kokoa…”, hoy ny mpisera AizatM ao amin'ny Kaonty Twitter [rus].
“Isa mampiontana izany kandidà 83 izany”, hoy ny mpisera Chingiz_KG [rus].
“Ka ahoana ry firenena? Miarahaba ny kandidà 83!”, hoy ny mpisera IlyaLukash, mpandala ny zon'olombelona nihiaka[rus].
“Hihorongorona ve ny vatom-pifidianana? ))”, hoy ny mpisera forum $kyMeR nanontany [rus].
“Tokony ho vita amin'ny taratasim-pidiovana(mihorona) ny biletà. Misy dikany izy amin'izay”, hoy ny sosokevitra[rus]avy amin'ny mpisera forum llena.
“Malaza amin'ny fiara i Alemaina, malaza amin'ny fahaiza-mamoron-javatra i Japan, fanta-daza amin'ny entam-barotra i Shina fa malaza amin'ny famokarana Filoha i Kyrgyzstan!” hoy ny hanihanin'ny mpisera forum Ilyich.
“Mieritreritra aho raha afa-manao flash mob [hetsika tselatra] isika hanaisotra ny kaontin'ny mpanao politika amin'ny lisitry ny namantsika. Androm-pifidianana ihany no mba ahatsiarovany antsika. RT!”, Azzzik nanoratra tao amin'ny Twitter-ny [rus].
“Andao hanaisotra azy ireo ao anatin'ny andro iray voafaritra. Ataovy sary an-tsaina anie ny fisaritahany – mpihaino maro no ho very ao anatin'ny andro iray. Ho kivy ry zareo ))”, hoy izy nanampy [rus].
“Ry vahoaka, Nahoana ianareo no tezitra tokoa? Fahadalana izany. Velona ny Fampielezan-kevitra an-tserasera mialoha ny fialan-tsasatra ohatra – izany no maha-be mpitsidika azy ireo sy mampiakatra ny varotra. Mazoto ny olona rehefa mila azy, na manana tombontsoa, na te-hanaitra ny besinimaro. Zavatra mandeha ho azy izany. Traikefa manerantany”, hoy i Aliya Akmatova nanoratra eo amin'ny rindrin'ny hetsika [rus].
“Maninona no esorintsika indray rehefa nampiantsika? Tsy te-hanelingelina na iza na iza ry zareo. Mieritreritra aho fa tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany no ampiasan'ny mpanao politika valantserasera”, tenin'i Peri Adanova [rus].
“Tsy hitako ny dikan'ny fanesorana ny mpanao politika. Fa naninona aho no nampiditra an-dry zareo? Tsy mandona ahy ry zareo. Fantatro ny tantaram-piainany rehefa manoratra ny sasany amin'izany ry zareo, na dia tsy ry zareo mivantana aza no manoratra azy. Ny sasany amin-dry zareo manoratra mihitsy, azonareo jerena izany. Tsy misy dikany ny katroka”, navoakan'ny [rus]mpisera ao amin'ny Diesel forum DRIVE2.KG .
Rehefa nandeha ny adihevitra dia 247 no nanaiky ny hanaisotra ny mpanao politika ary 78 no mety hanao izany, araka ny hita ao amin'ny takelaky ny hetsika [rus]. Ankoatra izany dia nihena be dia be ny isan'ny kandidà. Maro amin'izy ireo no tsy nahaloa vola; vitsy no tsy afaka fanadinana teny Kyrgyz na/sy tsy ampy ny isan'ny sonia hanohanana. Tapitra amin'ny 25 Septambra 2011 ny fisoratana anarana hirotsaka hofidiana. Hanomboka amin'ny 25 Septambra ka hatramin'ny 29 Oktobra ny Fampielezan-kevitra.
Ho hita eo moa izay valin-kafatra avy amin'ny mpanao politika Kyrgyz (raha misy izany) amin'ny 25 Septambra. Fa mbola maro no tsy resy lahatra. Araka ny lazain'ny solontenan'ny gazety Rosiana “Rossiyskaya Gazeta” Igor Shestakov hoe [rus]:
23 ora izayAzerbaijan